Avy amin’ny USAID sy PSI : nahazo famatsian-drano ny tobim-pahasalamana 213 | NewsMada
Avy amin’ny USAID sy PSI : nahazo famatsian-drano ny tobim-pahasalamana 213
Notoloran’ny PSI Madagascar sy ny USAID fitaovana ahazoana mampiasa rano madio miaraka amin’ny fanasan-tanana ny fari-piadidiam-pahasalamana, faritra Atsinanana, omaly. Hampiasain’ny CSB sy ny toeram-pitsaboana tsy miankina, Top réseau, ny fitaovana vaovao izay tafiditra amin’ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny rano. Natokana ho an’ny toeram-pitsaboana tsy mbola manana rano ny fanomezana, satria ilaina ny rano ho an’ny marary sy ny mpiasan’ny fahasalamana ao. Fitaovana 189 ho an’ny CSB I-II, ny 24 ambiny ho an’ny tobim-pahasalamana Top réseau. Sahirana amin’ny famatsian-drano avokoa ny CSB ankoatra ny ao Toamasina I nefa eny amin’ny tobim-pahasalamana no toerana voalohany tokony hanentanana ny mponina hampiasa rano madio isorohana ny fivalanana, pnemonia.
Ahitana siniben-drano miaraka amin’ny fanafody fanadiovan-drano ny fitaovana natolotra, miampy savony hanasana tanana. Ahafahana mampihena 44% ny tahan’ny aretim-pivalanana sy 23% amin’ny aretin’ny taovam-pisefoana ny fahazarana manasa tanana amin’ny savony, hoy ny fanazavana .
Efa manana paikady hampaharitra fahazoan-drano ny tobim-pahasalamana ny mpiasan’ny fahasalamana any an-toerana. Hitohy amin’ny sekoly ny fametrahana ny fahazoan-drano madio sy ny fanasan-tanana, hoy ny solontenan’ny PSI eto Madagasikara, Pierre-Loup Lesage.